Time to Smile :) – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged Development, funny, Life. Bookmark the permalink.
← Calling Time?
4 thoughts on “Time to Smile :)”
MrDBA | October 8, 2009 at 2:45 pm
ဟဲ့ ကလေးမ ဘယ်ပျောက်နေလဲ တစ်လောက ဖုန်းဆက်တာ ဖုန်းက Call Divert ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
ထူးခြားရင် ဘူးသခွားလုပ်ပါ။ ဟမ် …
ရွှေအောင် | October 9, 2009 at 9:57 am
ပျောက်နေပီး ပေါ်လာတော့လဲ ဟာသတိုလေးနဲ့.. အပျင်းကြီးလိုက်တာ..
ကုမ်ရာသီသူ | October 9, 2009 at 9:39 pm
Bro. DB>> ခွိခွိ။ ပျော်စရာပျောက်လို့ ကိုယ်ပါ ပျောက်မလားဆိုပြီး အပျောက်သွားကောက်နေတာပါခညာ။ ပြန်ရောက်ပါပြီ။ သတိတရရှိတာ ရှဲ့ရှဲ့။ 🙂
ရွှေအောင်>> ရေမရောရသေးဘူးကွဲ့။ တို့က အပျင်းစံချိန်မီ။ 😛
kom | December 6, 2009 at 1:26 pm